Uvela eMandeni okowamanqamu eNdoni | News24
Uvela eMandeni okowamanqamu eNdoni
Ngu Thabisile Mthwethwa (kwesokunxele) okowamanqamu weMiss Ndoni Cultural.PHOTO: supplied
INTOKAZI esnacaneevela eMandeni ngaphansi kwesifunda iLembe uThabisile Mthethwa ungomunye kwabalishumi wabakhethwe kwinhlolovo yezbuciko ibibanjwe uMasipala wesifunda nabeNdoni SA ngoNhlaba kuba babe yingxenye ye Indoni Culture School.
Ababengenele lenhlolovo baba nethuba lokuba bakhombise amakhono kusukela ekutheni bacule, bedanse noma behaye izinkodlo mase bephendula imibuzo yamaJaji.
Inhlolokhono yabakhona kuzozonke izifunda ezi-11 esfundazweni iKwaZulu Natali kwathi abalishumi abaphume phambili koMasipala babo babamba iqhaza enkambini yezikole nebibanjwe ngalamaHolide asebusika.
uThabsile yena usezoba yingxenye yabanye abaphumelela kwezinye izifundazwe nalapho azomela khona iKZN kwiNdoni Cultural festival nezobanjelwa e Inkosi Albert Luthuli International Convention Center (ICC) eThekwini lapho Indoni Miss Cultural ka-2018 eyokhethwa khona.
Indoni inhlangano engenzi nzuzo nebungaza amasiko nobuciko ngenhloso yokuguqula ukuziphatha kwabantu abasebancane nkulwa nezihlava ezithiyameza izimpilo zabo ibe ibe futhi iqwashisa ngempilo nje jikelele.